KDE 4.11.1 la heli karo | Laga soo bilaabo Linux
Nooca waa la sii daayay 4.11.1 de KDE SC, cusbooneysiin bille ah oo ay ka buuxaan hagaajinno ka caawiya xasilinta iyo hagaajinta waxqabadka deegaankan Desktop-ka wanaagsan.
Xusuuso taas KDE 4.11 Waad sii wadi doontaa inaad heshid cusbooneysiinta labada sano ee soo socota. Noocaani wuxuu kakooban yahay kaliya hagaajinta cilladaha iyo cusbooneysiinta tarjumaadda wuxuuna u noqon doonaa casriyeyn aamin ah oo lagu farxo qof walba
La hagaajiyay in ka badan 70 cayayaan ah oo u taagan hagaajinta maareeyaha daaqadda KWin, maareeyaha faylka hoomboro, iyo kuwa kale. Sida lagu sheegay bayaanka rasmiga ah, Plasma wuxuu ku bilaabmayaa si dhakhso leh, hoomboro waxay leedahay rogrogmo jilicsan, oo barnaamijyada iyo aalado kaladuwan ayaa adeegsada xusuusta yar.
Hagaajinta waxaa ka mid ah jiido oo ka soo noqoshada ka soo noqoshada hawsha illaa shaashadda, hagaajinta midabka iyo muujinta sagxadda ee Kate, iyo cayayaanno yaryar oo badan KMahjongg.
Waxaad ku arki kartaa isbedelo badan oo badan xiriirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » KDE 4.11.1 waa la heli karaa
Waxaan la yaabanahay sida wanaagsan ee KDE ugu socon doonto dhabta dhabta iyadoo:
cpu [4 x Intel (R) Core (TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz (GenuineIntel) @ 2.53GHz] video [Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller] codka [HDA-Intel - HDA Intel]
Dhab ahaan? _¬
Waan weydiiyay maxaa yeelay markii KDE ay bilawday isticmaalka plasma waxaan gaabis ugu dhaqaaqaayay calaamadeynta menus ... intaa ka dib waxaan bilaabay inaan jeclaado minimalism waxaana ku dhamaaday isticmaalka pekwm 😛
Fiidiyahaaga gundhigu ma yahay 256, 512 ama 1024 MB? Hadday 512MB tahay markaa waa inay duushaa.
Miinadayda waxay ku leedahay waxqabad aan horay loo arag.
Processor (4 x Intel (R) Core (TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz) video [AMD / ATI] Seymour [Radeon HD 6400M / 7400M Series] + 4GB DDR3
Heh heh, nacalad ha ku dhacdo, mashiinkaas ayey ugu duulayaan qalinleyda !!!
(weligaa si fiican looma sheegin 😉)
Hagaag, haysashada Slackware on my HP Workstation oo leh desktop-ka KDE, tani way dhacdaa >> http://www.youtube.com/watch?v=9dfWzp7rYR4
Hagaag, gurigayga wuxuu ku duulayaa hoose:
Processor [2x Intel Atom Dual Core (TM) @ 1.80GHz] 2Gb DDR3
Shaqadayda xitaa uma sheego iyaga:
Oh by the way, Uma isticmaalo akonadi, ama nepomuk ama wax la mid ah, si aan u isticmaalo xoogaa yar oo kheyraad ah waxaan bilaabay isticmaalka PyCharm (xishood naftayda).
Ragga dhabta ah, waxay isticmaalaan desktop pc desktop
Wayna ka sii badan yihiin haddii aad ku isticmaasho rugta shaqada guriga.
Ohhh fiiri yaa ku soo laabtay Arch sidoo kale xD
Waxaan haystaa dhabta 2008 waana duulaysaa
Hagaag, kiiskeyga, Kde 4.11 oo leh OpenSUSE 12.3 wuu kafiican yahay weligiis (AMD V140 2.3 GHz processor, AMD / ATI Radeon HD 4200 video, oo leh gig wan)
Dcoy, Xitaa daaqadaha vista waxay ku duulaan i5
War aad u fiican KDEros. Iyo tan iyo markii aan la ciyaarayo KDE mashiinkeyga kumbuyuutarka ee leh Slackware ee VirtualBox.
KDE waa mid aad u wanaagsan, jooji cabsida inay i maamusho iyo inkale, iskuday oo arag, shaqada waxaan hayaa Dual-Core E5700 3.00GHz oo leh 4.10.5 waana duulaysaa, taasna waa pc xoogaa duug ah kuwaan waqtiga.
KDE maahan Windows Aero. Waxaan isku dayay KDE oo leh 96 MB oo fiidiyow ah VirtualBox runtiina way duushaa.
KMahjongg !! ?? WTF? Waa hagaag, in la ciyaaro mahjongg waxaa la yiri ... 😀
Waxaan u hayaa gabadhayda pentium 4 oo leh 1GB oo si fiican ayey u shaqeysaa. Arch Linux oo leh 4.11.
Waxaan ka hadleynaa koox ka badan 10 sano.
Guud ahaan, distros-ku-saleysan KISS wuxuu u muuqdaa inuu ka dhakhso badan yahay "sahlan" sida "Arch iyo Slackware".
Waxaan horeyba ugu isticmaalay KDE Slackware runtuna waxay tahay inay igu dhiirrigelisay inaan dib udhaco GNOME 3.4 dib udhaca si aan ugu beddelo KDE 4.8.4 (midka aan ku haysto keydka Debian). Noocani wuxuu umuuqdaa mid quruxsan, waxaana rajeynayaa inuu kafiicnaan doono XFCE iyo LXDE adeegsiga qalabka.
Hagaag, fiiri qoraalkayga loogu talagalay Debian KDE kaas oo xoogaa isku hagaajintu kaa caawin karto inaad otomaatig noqoto.
Waxaan eegi doonaa qoraalkaaga, tan iyo markii dhowaan GNOME 3.4 dib udhaca guddiga hoose ee guddi-hawleedku wuxuu u dhintey gaabis dartiis.
Waxaan horeyba ugu jiraa KDE >> https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2013/09/pantallazo-debian-kde-iceweasel.png?73b396
Bootku wuu fiicnaaday?
Aniga oo kahadlaya KDE, waxaan hubaa inaan ka takhaluso dib u dhaca GNOME 3.4 maxaa yeelay waxay noloshayda ka dhigtay mid murugo leh shilalka ay galaan. Waxaan u socdaa KDE.
Gnome waa laga isticmaali karaa nooca 3.8 wixii ka dambeeya, aniga ayey igu habboon tahay 🙂
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Tan iyo markii aan isticmaalo Debian Stable, waxaan u beddeli doonaa GNOME 3.4 dib ugu noqoshada KDE.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho Debian oo leh KDE waxaan kugula talin lahaa inaad tagto Tijaabinta (oo wali khibraddu sidaa uma fiicna), ama u beddel ZevenOS Neptune
Maya mahadsanid. Waxaan bilaabay adeegsiga GNU / Linux oo leh KDE 3 oo kuyaalay Mandrake 9, markan kaliya waxaan dib ugu noqonayaa desktop oo aanan ahayn inaan joojiyo isticmaalka.
Jidka, adoo la jaan qaadaya goobaha ay KDE leedahay, desktop-ka waa loo fududeyn karaa heer intaas la eg oo u noqon kara sida ugu dhakhsaha badan Arch ama Slackware (tan dambe, waxaan ka fikirayaa inaan ku rakibo jirkeygii hore ee Pentium IV oo leh XFCE fiidiyow isku dhafan oo ay leedahay iyo Chipset-ka VIA ee ay ku duubtay uma roona si markaa loogu isticmaalo KDE).
Ferdinand Duarte dijo
Waxay leedahay dib u gurasho, habka netbook ma badbaadiyo Nicmada
Jawaab Fernando Duarte
Diyaar! Waxaan horeyba ugu jiraa KDE, laakiin wali waxaan ubaahanahay inaan sameeyo xoogaa isbadal ah si aan diyaar ugu noqdo.
Waa salaaman tahay, sidee tahay, waad ku mahadsan tahay warka, horeyba ayuu ugu soo baxay meesha loo yaqaan 'chakra repos', laakiin waxay ii sheegaysaa inay tahay inaan iska fogeeyo darawalka atheros (madwifi), laakiin ay iga dhammaanayso qalabka adabtarada 'wireless', waana sababta aanan u cusboonaysiin, waad ku caddayn dhajin tan? Fadlan, runta, waan baaray dhamaantoodna waxay leeyihiin madwifi ha laga saaro, laakiin ma dhahayaan sidee loo xaliyaa darawallada atheros ..: \_
sifiican .. mahadsanid .. (iyo)
Amarka taariikhda leh taariikhda fulinta amar kasta